नीति तथा कार्यक्रमः संसदमा कसले–के भने ? (भिडियो)
सरोज अधिकारी/दिलीप पोखरेल (इमेज): काठमाडौं, जेठ ९ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सम्बोधनमार्फत् सरकारले संसदमा प्रस्तुत् गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा आधादर्जन संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।
ट्रेड युनियनको अधिकार कटौती हुँदैन : महत
काठमाडौं, जेठ ९ । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ट्रेड युनियनको अधिकार कटौती नहुने प्रस्ट पारेका छन् ।
‘नीति तथा कार्यक्रमले जनतालाई निराशा, मतदाताको अपमान’
काठमाडौं, जेठ ९ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत् गर्दा सभामुख र राष्ट्रियसभाको अध्यक्षलाई ‘सम्माननीय’ भन्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै गुनासो व्यक्त गरेका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि ६ ओटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता
काठमाडौं, जेठ ९ । सरकारले संघीय संसदमा प्रस्तुत् गरेको आव २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममाथि ६ ओटा संशोधनका सूचना दर्ता भएको छ ।
हावादारी गफ गरेर जनतालाई नझुक्याउन सरकारलाई देउवाको सुझाव
काठमाडौं, जेठ ९ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले संसदमा प्रस्तुत् गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमुखी नभइ सैद्धान्तिक र हावादारी गफमात्र भएको टिप्प्णी गरेका छन् ।
काठमाडौं, जेठ ८ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले प्रगतिशील र समाजवादउन्मुख बजेट ल्याउने बताएका छन् ।
नीति र कार्यक्रम पार्टीको घोषणापत्रजस्तो : कांग्रेस
काठमाडौं, जेठ ८ । नेपाली कांग्रेसले सरकारद्वारा प्रस्तुत् नीति तथा कार्यक्रममा सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई ‘सम्मान सूचक’ सम्बोधन नगरेकोतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
अक्कल कुँवर/दिलीप पोखरेल (इमेज): काठमाडौं, जेठ ८ । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नाराका साथ आगामी पाँच वर्षलाई आधार मानेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
यी हुन् नेकपाका ४४१ केन्द्रीय सदस्य (नामावली)
काठमाडौं, जेठ ८ । नवगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको नामावली सार्वजनिक गरेको छ ।
काठमाडौं, जेठ ७ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जनताको आर्थिक समृद्धि र विकासमुखी रहेको बताएका छन् ।
काठमाडौं, जेठ ७ । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधनको विषय टुंगोमा पुगिसकेको बताउँदै मधेसवादी दल सरकारमा सहभागी हुन प्राविधिक कुरा मिल्नमात्र बाँकी रहेको जानकारी दिएका छन् ।